Iindaba -Ukhetho lwezakhono zescreen sokungcangcazela kwescreen
1. ngokokukhetha indawo
Ubude nobubanzi besiza kufuneka buqwalaselwe ngohlobo lokuvavanywa kokungcangcazela komgama; Ngamanye amaxesha ububanzi beplagi yescreen sokungcangcazela komda bunqunyelwe, kwaye ukuphakama kwesiza kuyancipha. Ngeli xesha, iinjini ezimbini ezisingcangcazelayo zinokubekwa phezulu okanye kumacala omabini escreen sokungcangcazela komgama ngokweemeko zesiza.
2. Ukuchaneka kovavanyo kunye nokuvavanywa kwesivuno semathiriyeli kufuneka kuthathelwe ingqalelo
I-1) Ukuba kukhudlwana kubude bomphezulu wescreen sokungcangcazela komgama, ukuphakama kokuchaneka kokuphononongwa, kokukhona ububanzi, ukuphakama kwesivuno sokuhlola. Ke ngoko, ububanzi nobude obufanelekileyo kufuneka bukhethwe ngokwemeko ethile.
2) Xa amandla emveliso esezantsi, sinokukhetha uhlobo oluncinci lwesikrini sokungcangcazela, kwaye xa amandla emveliso ephezulu, kufanelekile ukuba sikhethe isikrini esikhulu sokungcangcazela.
3.I-angle ye-inclination ye-screen yomgangatho wesikrini eshukumayo,
Ukuba i-angle yokuthambekela kwendawo yesikrini incinci kakhulu, loo nto iya kuvalwa. Ukuba i-angle yokuthambekela inkulu kakhulu, ukuchaneka kokujonga kuya kuncitshiswa. Ke ngoko, i-engile yokuthambeka komphezulu wescreen kufuneka ibe phakathi.
4. indalo yemathiriyeli
1) Xa ukhetha isikrini esingcangcazelayo, kuya kufuneka ukhethe izinto ezahlukeneyo ngokweempawu ezahlukeneyo. Umzekelo, ukubola ukukhetha insimbi eshukuma isikrini.
2) Ubungakanani be-mesh bukhethwe ngokobungakanani bezinto eziphathekayo.